अहिले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आवश्यक छैन : चिनकाजी श्रेष्ठ – Aajako Khabar: आजै अनि ताजै
अहिले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आवश्यक छैन : चिनकाजी श्रेष्ठ
काठमाडौँ, २५ कात्तिक, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता चीनकाजी श्रेष्ठले वर्तमान सरकार पूर्ण रुपमा असफल भैसकेको दाबी गरेका छन् । आज रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित साक्षात्कारमा उनले भने,’अहिलेको सरकारले दिन दुई गुणा, रात चौगुणाले काम गर्नुपर्ने हो । तर, अहिले सरकारले काम गर्न सकेन् । यो सरकारको आयु पाँच वर्षको छ । तर, यसले स्थायी सरकारको गतिविधि देखाउन सकेको छैन् । यसको गति कछुवाकोजस्तो छ । न हाँसको चाल, न बकुल्लाको चाल नै भयो ।’
सरकारको नेतृत्वकर्ता वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रेल कुदाउने, राष्ट्रिय ध्वजाबाहक पानीजहाज चलाउने योजनाहरु सार्वजनिक गरेपनि यी सबै कुराहरु दीर्घकालिन योजना भएकोले अहिले सरकारले त्यतातिर भन्दापनि जनतालाई महँगीबाट बचाउनुपर्ने आवश्यकत्ता रहेको नेता श्रेष्ठको भनाई छ ।
उनले भने, ‘यहाँ गाडी चढेर हिँड्न अप्ठ्यारो छ । काठमाडौंका सडकहरु अव्यवस्थित् छन् । यीनीहरुको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । अन्र्राष्ट्रिय सम्मेलनहरु हुँदा रातारात सडहरु पीच भएका छन् । तर, अहिले आएर पैसा छैन भन्न यो सरकारलाई सुहाउँछ ? औषधोपचारको लागि पैसा हुने तर सडक बनाउन पैसा हुँदैन ।’
श्रेष्ठले वर्तमान सरकारले जनतालाई दिउँसै रात पार्ने खालका भाषाहरु प्रयोग गरिरहेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले दिउँसै जनतालाई रात पार्ने भाषाहरु बोलिरहेका छन् । यत्रो शक्तिशाली दुई तिहाईको बहुमतको सरकार छ । कांग्रेसले पनि काम गर्न विरोध गरेको छैन् । सरकारलाई राम्रो काम गर्न कुनै अवरोध छैन् । वर्तमान सरकार किन धिमा गतिमा चलेको छ ? मैले बुझ्न सकेको छैन् ।’
वर्तमान कम्युनिष्ट सरकार यतिवेला अन्यौलपूर्ण अवस्थामा रहेको उनको आरोप छ । उनले भने,’अगाडि बढ्नुपर्ने बेलामा यो सरकारको गति पछाडि फर्केको छ । यो सरकार आफ्नो हातमा सम्पूर्ण शक्ति जम्मा गर्न उद्धत छ । आफ्नो हातमा शक्ति लिएर प्रतिपक्षीलगायत अन्य सरकारविरोधी शक्तिहरु पत्रकार, वकिल र बुद्धिजीवीहरुलाई आफ्नो कुरा राख्नै नपाउनेगरि विभिन्न हत्कण्डा गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो हातमा शक्ति आर्जन गर्नुभएको छ । राष्ट्रिय अनुशन्धान विभाग, राजश्व अनुशन्धान विभागलगायतका महत्वपूर्ण विभागहरु आफ्नो हातमा लिनुभएको छ । यो सरकार आफ्नो विरोध गर्नेहरुलाई दमन गर्नमै सिमति रहेको छ ।’
दुई तिहाईको सरकार भएपनि यसले संघीयता कार्यान्वयन गर्न र प्रदेश सरकारलाई मजबुद बनाउने काम नगरेको उनको आरोप छ । उनले भने,’संघीयता कार्यान्वयन गर्नतर्फ यो सरकार गम्भिर छैन् । बरु आफ्नो दायित्वबाट पछाडि फर्केको छ । स्थानीय सरकारले पनि मनलाग्दी कर लिएर जनतालाई बोझ दिएको छ । अहिलेपनि जग्गा रजिष्ट्रेशन गर्ने कुरामा विवाद छ । शुल्क उठाउने कुरामा विवाद कायमै छ । तर यी सबै समस्याहरुको समाधान गर्नतर्फ सरकार गम्भिर दखिएन् ।’
सरकारले अहिलेसम्म राष्ट्रिय प्राकृति स्रोत तथा वित्तिय आयोग गठन नगरेकोमा पनि उनले आक्रोश पोखे । श्रेष्ठले वर्तमान सरकार संघीयतालाई नै असफल पार्ने खेलमा लागेको गम्भिर आरोप लगाए । काम गर्ने शक्ति र वातावरण हुँदाहुँदैपनि वर्तमान प्रधानमन्त्रीले काम नै गर्न नचाहेको उनले आरोप लगाए ।
फरक प्रसँगमा उनले अहिले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको आवश्यकत्ता नै नरहेको जिकिर गरे । उनले भने,’वामदेवजीले किन यो कुरा उठाउनुभयो ? हामीले बुझेको छैन् । तर, यो राम्रो कुरा होईन् । समृद्धि हाँसिल गर्न यो उपर्युक्त बेला हो । यस्तो बेलामा फेरी विभिन्न बखेडा झिक्नुहुँदैन् । यो सरकार दुई तिहाईको सरकार हो । यो आँफैमा झण्डै झण्डै सहमतिको सरकार नै हो । त्यसैले अहिले सहमतिको सरकारको कुरा गरेर राजनीतिक विवादमा अल्झिने बेला होईन् । राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको आवश्यक नै छैन् । कांग्रेस सरकारमा जाँदैन् ।’
उनले वर्तमान सरकारले हतार–हतार गरेर कमिशनको चक्करमा बुढीगण्डकी परियोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिएको भन्दै कडा विरोध जनाए । यो परियोजना जनताकै सहभागितामा बनाउनुपर्छ भनेर हामी भन्दै आएका छौं । यो नेपालको आफ्नै स्रोत र साधनले बनाउनुपर्छ । तर, एकाएक यो सरकारले असफल कम्पनी गेजुवालाई बनाउन दिने निर्णय गरेको छ । यो सबै कमिशनको खेल हो । सरकराको यो कदमले अब बुढीगण्डकी नबन्ने हो कि भनेर हामीलाई शंका लागेको छ । जनतालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनमा सहभागि हुनबाट बञ्चित गर्नुले यो सरकार अराष्ट्रिय हो की भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।’